Laba Canlayntii TPLF Waxay u Horseeday Itobiya Guuldarro | Voice Of Somalia
Mukulaasha (yaanyuurada) inay caddahay iyo inay madow tahay qiimi maleh marba hadday soo qabanayso dooligii (jiirkii) – “it doesn’t matter if a cat is black or white, so long as it catches mice” Hadalkaa waxaa yidhi Deng Xiaoping oo ahaa ninkii aabaha u ahaa horumarka dhaqaale ee dawladda Shiinaha. Mr. Deng jaga rasmi ah inkastoo aanu ku magacwnayn, hadana wuxuu ahaa hogaamiyaha dalka markuu dhintay Mao Zedong oy fikirka aad ugu kala duwanaayeen.
Sheekooyinka lagu qoslo (chokes) waxaa ka mid ah in nin lagu soo xidhay qol ay ku jireen laba maxbuus. Waxaa caada ah inay iswareystaan wixii lagu soo xidhay mid walba. Midkii ugu horeeyay ayaa yidhi waxaan caayay Deng Xiaoping, midkii kale ayaa yidhi waxaa la’igu eedeeyay in aan taageero Deng Xiaoping, ninkii lasoo xidhay ayaa yidhi Deng Xiaoping-ka aad sheegeysaan waa aniga. Waxaa loola jeedaa makuu ahaa Guddiga Fulinta ee Xisbiga Shuuciga qofka caaya waa la xidhi jiray, markii laga saaray xisbigana qofkii taageeray waa la xidhay, markii dambana waxaa lasoo xidhay isaga qudhiisii. Ninka taariikhdaa leh, wuxuu ka saaray Shiinaha faqrigay ku jireen, wuxuuna u horseeday inay noqoto dawladda 2aad ee caalamka ugu hodansan. Wuxuu ula jeeday Deng Xiaoping halku-dhigiisa ku salaysan midabka mukulaasha, in nidaamka dhaqaale ee dalka lagu horumarinayo aan loo fiirin inuu yahay hantigoosad iyo inuu yahay Shuuci marba haduu dalka ku gaadhayo horumar dhaqaale, iyadoo xisbiga shuuciga oo kali ah uu dalka ka talinayo. Mukulaashii waxay noqotay mid laba midab leh, oo siyaasada ka ah shuuci, dhaqaalahana hantigoosad.
Kaligii taliye kasta oo doonaya inuu dalkiisa ku xukumo hal xisbi oo isaga uu dhoodhoobtay, wuxuu ku dadaalaa inuu abuuro sawir ah inuu horumar dhaqaale gaadhsiinayo dalka sida Shiinaha, hadii laga daayo qalindaarka Dimoqraadiyadda iyo waxa loo yaqaano xuquuqda aadanaha, maadaama badeecada ugu badan ee dalka Shiinaha dibadda looga dhoofiyo ay soo saaraan maxaabiis ku xidhan dambiya aan macna lahayn oo sidii adoonsigii loogu shaqeeyo.
Meles Zenawi wuxuu ka mid ahaa kaligood taliyayaasha (Dictators) aaminsanaa nidaamkaa Shiinaha, isagoo waliba Afrika u dhex orday. Waxaa ka mid ahaa hidisaha Meles Zenawi inuu xisbiga EPRDF la mid noqdo Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha (Communist Party of China CPC) oo aan marna la holinin in TPLF/EPRDF xukunka laga qaado. Hasa ahaatee wuxuu damcay inuu usii fuulo ujeedadiisaa laba faras oo kala socda, taasoon suurtagal ahayn ugu dambayntiina sidii la sadaalinayay u dhacday. Warbixina badan ayay ka qoreen Itobiya dadka aqoonta u leh arimaha siyaasadda iyo bulshada oo inataba tilmaamayay inay Itobiya noqonayso dawlad hagaastay (Failed state). Sababta ay sidaa u dheheena waxay ahayd nidaamka uu dalka ku maamulo xisbiga TPLF/EPRDF . Marka laga yimaado labada shacab oo taariikh iyo dhaqanba ku kala duwan, waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin xisibiga shuuciga ee Shiinaha (CPC) iyo xisbiga TPLF/EPRDF ee midna keenay inuu gaadhsiiyo dalkiisa horumar dhaqaale midna u horseedo burbur iyo kala tag waxaa ka mid ah;
Xisbiga shuuciga Shiinaha waa xisbi caqiida shuuci ah aaminsan oo kaadirkiisa iyo hogaankiisaba ku sacda barnaamijka loo dajiyo xisbiga, mesha xisbiga EPRDF uu yahay xisbi ay u samaysteen Ihaadhig (TPLF) inay dalka ku xukumaan magaciisa. Waxay usoo samaysteen hadafkoodaa 3ex xisbi oo ka kala socda 3ex qawmiyadood oo iyaga ay soo xusheen. 20sano ka dib ay waxaa dhacday in xubnihii ay TPLF usoo xusheen inay ku xukumaan dalka ay fahmeen ujeedada loosoo xushay inay ahayd in qawmiyadda Tigree loo afduubo Itobiya oo laga shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa gobolkaa iyo dadka dagan. Waxay arkeen awoodii dalka oy gacanta ku hayaan saraakiishii Ihaadhig iyo dhaqaalihii dalka oo ku ururay shirkada ay samaysteen ee Endowment Fund For The Rehabilitation of Tigrai (EFFORT).
Shiinaha waa dawlad weyn xag dhaqaale iyo ciidan oon uga baanayn inay ka hesho dibadda mucaawano, meesha Itobiya jiritaankeeda uu ku xidhan yahay dawarsiga dibadaha. Qofka dawarsanayana waxaa u ah dhaqan inuu muujiyo astaamo loogu hamrado. Kooxda TPLF oo ahaa shuuciyeenta madalka adag waliba, waxay ku qasabtay say u helaan mucaawanada ree Galbeedka inay dhahaan dimoqraadiyad ayaan dalka ku xukumaynaa oo doorasho iyo afti shacab qabtaan. Nifaaqaa siyaasadeed ee noocaa ah meelna laguma guulaysan caalamka. Inaad joojiso doorasho iyo dimoqraadiyad iyo inaad sida saxda ah ugu dhaqanto waxba kama dhexeeyo, waxayna ku dambaysaa inuu shacabka ka gadoodo xatooyada codkooda. Jamhuuriyadihii Carabta ayay ka dhacday oo shacabka ay ka gadoodeen dimoqraadiyadda aan jirin ee lagu dhacayo codkooda iyo maalkooda.
Shiinaha qawmiyadda ugu badan ee HAN oo ah 91% shacabka Shiinaha ayaa talada gacanta ku haya, meesha Itobiya ay qawmiyada Tigree oo dhaafin kari waayay cadadka ay sheegtaan inay ka yihiin Itobiya 6.07% ayaa xukunka ku qabsadey qoriga caaradii. Si hadaba aqaliyadaa yar ay xukunka u haystaan waxay adeegsadeen xikmadii isticaamrka ee ahayd Qaybi oo Xukun. Iyagoo ka faa’idaysanaya cabudhintii xukuumadihii Amxaarada ayay usoo alifeen ismaamulka qawmiyad walba, hasa ahaatee, waxay dul dhigeen qawmiyada walba Jenen Tigree ah iyo Sirdoon Tigree ah oo dhab ahaan ugu taliya kuwa talada qawmiyadaha loo dhiibay.
Caalamka ree galbeedka iyagoo ogsoon maamulka TPLF iyo xad-gudubka ay ku hayaan shacabka Itobiya, sababta ay u siiyaan taageerada ugu badan ee la siiyo dalalka saboolka ah maxay tahay? La Soco.